» “माधव नेपालसहित, पूर्वमाओवादी,घटक एक हुँदै, डकुमेण्ट, लेख्ने जिम्मा,बाबुरामले पाए “ “माधव नेपालसहित, पूर्वमाओवादी,घटक एक हुँदै, डकुमेण्ट, लेख्ने जिम्मा,बाबुरामले पाए “ – हाम्रो खबर
“माधव नेपालसहित, पूर्वमाओवादी,घटक एक हुँदै, डकुमेण्ट, लेख्ने जिम्मा,बाबुरामले पाए “
हाम्रोखबर संवाददाता 208 Views
“विभिन्न समूहमा विभाजित भएका पूर्वमाओवादी घटकहरु एक हुने तयारीमा जुटेका छन् । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, जनता समाजवादी पार्टीका संघीय परिषद् अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराई र नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी) का मोहन वैद्यले नेतृत्व गरेका पार्टीहरुबीच सके पार्टी एकता र नभए संयुक्त मोर्चा बनाउने तयारी भएको उच्च स्रोतले जनाएको छ ।”
“पूर्वमाओवादी घटकमा जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र माधव नेपाल नेतृत्वको नेकपा (एकीकृत लोकतान्त्रिक) बीच समेत पार्टी एकता वा संयुक्त मोर्चा बनाउने तयारी भएको छ । माओवादी केन्द्रका युवा नेता विशाल खड्काले पुर्व माओवादी शक्तिबीच पार्टी एकता र अरु वामपन्थी पार्टीहरुसंग गठवन्धन निर्माण गरेर जाने विषयमा छलफल चलिरहेको बताए ।”
“पार्टी एकताका लागी माओवादी अध्यक्ष दाहाल, जसपाका संघीय परिषदका अध्यक्ष भट्टराई र वैद्यको बीचमा विभिन्न चरणमा छलफल भइसकेको छ । १० वर्ष जनयुद्ध लडेर आएका नेताहरु दाहाल, डा। भट्टराई, बैद्य र नेत्रविक्रम चन्दले शान्ति प्रक्रियामा आएसँगै अलग अलग पार्टी बनाएका थिए ।”
“बाग्मती प्रदेश सभाका सदस्य समेत रहेका नेता खड्काले भने, ‘सके हामी सवैले एउटा वृहत पार्टी बनाएर जानुपर्छ त्यो नभए पनि माओवादी घटकहरुको विचमा पार्टी एकता गर्ने र अन्य वामपन्थी पार्टीहरुबीच गठवन्धन निर्माण गरेर अघि बढ्नुपर्ने जरुरी भइसकेको छ । त्यो बाटोतर्फ चांडै जान्छ ।”
“माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड र डा. भट्टराईबीच यसबारेमा पछिल्लो समय नियमित जस्तै छलफल चलिरहेको छ । नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकता भएर बनेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीलाई सर्वोच्च अदालतको २०७७ फागुन २३ गतेको फैसलाले उल्ट्याइदिएपछि प्रचण्डले बृहत कम्युनिष्ट एकताको तयारी थालेका हुन् । तर, त्यसको नाम भने माओवादी नराख्ने सहमति नेताहरुबीच भइसकेको छ ।”
“केपी ओली बाहेकको बृहत कम्युनिष्ट एकताको तयारीमा हामी जुटेका छौं । त्यसमा उपेन्द्रजी पनि सकारात्मक हुनुहुन्छ । हामीले विप्लवजीसँग पनि छलफल गरिरहेका छौं । यस विषयमा माधव र प्रचण्डबीच यसअघि नै सहमति भइसकेको छ,’ स्रोतले भन्यो ।”
“सोमबार बिहान सामाजिक सञ्जाल ट्वीटरमार्फत डा। भट्टराईले पार्टी एकताका लागि भइरहेको तयारीको संकेत दिएका छन् । उनले देशमा राजा ज्ञानेन्द्र शाह गए, केपी शर्मा ओली गए तर पनि कुर्सीको खेल जारी रहेको बताउँदै देशमा छिमेकीको हैकम, जयसिंह धामीको बेपत्ता, छाउपडी, मधेसी, थारू, जनजातिको पहिचानको खोजी जारी रहेकोले वैकल्पिक शक्तिको खोजी पनि जारी रहेको बताए ।”
“ज्ञानेन्द्र गए, ओली गए तर कुर्सीको खेल जारी छ । भारत, खाडी पस्ने युवाहरूको लर्को जारी छ । कमिसनखोरको खेलो जारी छ । छिमेकीको हैकम जारी छ । जयसिंह धामीको बेपत्ता जारी छ । छाउपडी जारी छ । छोइछिटो जारी छ । मधेसी, थारू, जनजातिको पहिचानको खोजी जारी छ । श्रमिकको चुलो खाली छ,’ उनले लेखेका छन्, ‘अतः वैकल्पिक शक्तिको खोजी जारी छ ।”
“साथै जसपा संघीय परिषद् अध्यक्ष डा. भट्टराई अहिले जिल्ला दौडमा छन् । उनले विभिन्न जिल्लाका नेता तथा कार्यकर्ताहरुसँग प्रत्यक्ष संवाद सुरु गरेका छन् । कम्युनिष्ट घटकहरुसँगको एकता प्रक्रिया अगाडि बढाउने तयारी भइरहेका बेला डा। भट्टराईले जिल्ला पुगेर आफ्नो पंक्तिलाई एकतावद्ध राख्ने कोशिस गरेका छन् ।”
“यता, नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालले तत्काल नेकपा माओवादी केन्द्रसँग एकता नगर्ने बताए पनि वाम लोकतान्त्रिक शक्तिहरुसँग सहकार्य हुने स्पष्ट पारेका छन् ।”
“शनिबार ललितपुरमा आयोजित कार्यक्रममा अध्यक्ष नेपालले भनेका थिए, ‘अरु कुनै पार्टीसँग तत्काल एकता गर्ने सोच छैन । यो पार्टी माओवादीमा गएर मिल्छ कि भन्ने भ्रम नराखे हुन्छ । अहिले यो पार्टीको आधार बलियो बनाउने छौं ।”
“नेताहरु पार्टी एकताका पक्षमा सकारात्मक रहेकाले एकताको खाका तयार पार्ने जिम्मा स्वयम् बाबुरामले पाएका छन् । अध्यक्ष प्रचण्डले एकताको ड्राफ्ट तयार पार्ने जिम्मा बाबुरामलाई दिएको स्रोतले जानकारी दियो ।”
“‘बाबुरामजीले नयां पार्टीको डकुमेण्ट लेख्ने काम गरिरहनुभएको छ । सके उपेन्द्रसहित पार्टी एकता नै हुन्छ नभए माओवादी घटकबीच पार्टी एकता गरेर अरु दलहरुसंग संयुक्त मोर्चा बनाएर अघि बढ्ने कुरा हुन्छ ।’ स्रोतले काठमाण्डुपाटीसंग भन्यो ।”